Numeri 23 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
23 Wathi uBhileham kuBhalaki: “Ndakhele kule ndawo izibingelelo+ zibe sixhenxe uze undilungiselele kule ndawo iinkunzi zeenkomo zibe sixhenxe neenkunzi zeegusha zibe sixhenxe.” 2 Ngoko nangoko uBhalaki wenza kanye njengoko wathethayo uBhileham. Emva koko uBhalaki noBhileham banikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.+ 3 Wathi uBhileham kuBhalaki: “Yima wena ngasemnikelweni wakho otshiswayo,+ undiyeke ndihambe mna. Mhlawumbi uYehova uya kunxibelelana nam, andihlangabeze.+ Ngoko ke nakuphi na andibonisa kona, ndokuxelela ngokuqinisekileyo.” Wahamba ke waya kwinduli engenanto. 4 Uthe uThixo akunxibelelana noBhileham,+ wathi yena Kuye: “Ndimise ngezintlu izibingelelo zasixhenxe, ndaza ndanikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.”+ 5 Ngoko uYehova wabeka ilizwi emlonyeni kaBhileham+ wathi: “Buyela kuBhalaki, wenjenje ukuthetha.”+ 6 Wabuyela ke kuye, yaye, khangela! yena neenkosana zonke zakwaMowabhi babemi ngakumnikelo wakhe otshiswayo. 7 Wandula ke wathetha ngomzekeliso+ wathi: “UBhalaki ukumkani wakwaMowabhi undithabathe kwa-Aram,+Ezintabeni zasempuma esithi:‘Yiza, undiqalekisele uYakobi.Ewe, yiza, uqalekise uSirayeli.’+ 8 Ndingathini na ukushwabulela abo angabashwabulelanga uThixo?+Ndingathini na ukuqalekisa abo angabaqalekisanga uYehova?+ 9 Kaloku nanko ndimbona ndisencotsheni yamawa,Nanko ndimbukele ndiphezu kweenduli.Esi sizwana sizimisele iminquba yaso sodwa,+Asibalelwa phakathi kwazo iintlanga.+ 10 Ngubani na ongawabalayo amasuntswana othuli lwakwaYakobi,+Nongayibalayo inxalenye yesine kaSirayeli?Umphefumlo wam mawufe ukufa kwabathe tye,+Ukuphela kwam kube njengokwabo.”+ 11 Wathi uBhalaki kuBhileham: “Yintoni le undenza yona? Ndikuthabathele ukuba uzishwabulele iintshaba zam, naku wena uzisikelela ngokupheleleyo.”+ 12 Waphendula yena wathi: “Oko akubekileyo uYehova emlonyeni wam mandingakunyamekeli na ndikuthethe?”+ 13 Wandula wathi uBhalaki kuye: “Khawuze siye ndaweni yimbi apho unokubabona khona. Uya kubona isiphelo sabo sodwa,+ akuyi kubabona bonke. Yaye uze undishwabulelele bona apho.”+ 14 Ngoko wamsa entsimini kaZofim, encotsheni yePisga,+ yaye ke wakha izibingelelo ezisixhenxe waza wanikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.+ 15 Emva koko wathi kuBhalaki: “Yima apha ngasemnikelweni wakho otshiswayo, ndize, ke mna, ndiye kunxibelelana naye phaya.” 16 Ngoko uYehova wanxibelelana noBhileham waza wabeka ilizwi emlonyeni wakhe wathi:+ “Buyela kuBhalaki,+ wenjenje ukuthetha.” 17 Wafika ke kuye, yaye, khangela! wayemi ngakumnikelo wakhe otshiswayo, neenkosana zakwaMowabhi zinaye. Wathi uBhalaki kuye: “Uthethe ntoni na uYehova?” 18 Wandula ke wathetha ngomzekeliso wathi:+ “Suka ume, Bhalaki, uphulaphule.Ndibekele indlebe, nyana kaTsipore.+ 19 UThixo akamntu ukuba athethe ubuxoki,+Akanyana waluntu ukuba azisole.+Etshilo nje yena akayi kwenza na,Ethethile nje akayi kuphumeza na?+ 20 Khangela! Ndithatyathelwe ukuba ndisikelele,Usikelele Yena,+ yaye andinakukurhoxisa oko.+ 21 Akawananzanga nawaphi na amandla angaqhelekanga+ asetyenziswa nxamnye noYakobi,Akabonanga nkathazo nxamnye noSirayeli.UYehova uThixo wakhe unaye,+Ukukhahlelwa kakhulu kukakumkani kuphakathi kwakhe. 22 UThixo uyabakhupha eYiputa.+Amendu akhe anjengawenqu.+ 23 Akunakusetyenziswa mabophe welishwa nxamnye noYakobi,+Yaye akunakuvunyiswa nxamnye noSirayeli.+Ngeli xesha kunokuthiwa ngoYakobi noSirayeli,‘Hayi oko akwenzileyo uThixo!’+ 24 Yabona, esi sizwana siya kusuka njengengonyama,Siphakame njengengonyama.+Asiyi kulala phantsi side sidle ixhoba,Sisele igazi lababuleweyo.”+ 25 Wathi uBhalaki kuBhileham: “Ukuba ke, akunakumshwabulela konke konke, ngoko, ubungafanelanga kumsikelela konke konke.” 26 Waphendula uBhileham wathi kuBhalaki: “Bendingathethanga na kuwe, ndathi, ‘Konke akuthethayo uYehova ndiya kwenza kona’?”+ 27 Ngoko wathi uBhalaki kuBhileham: “Nceda ke uze. Mandikuse kwenye indawo. Mhlawumbi kolunga emehlweni kaTHIXO oyinyaniso ukuba undishwabulelele yena apho.”+ 28 UBhalaki wamsa ke uBhileham encotsheni yePehore, ekhangele eYeshimon.+ 29 Wathi uBhileham+ kuBhalaki: “Ndakhele kule ndawo izibingelelo zibe sixhenxe uze undilungiselele kule ndawo iinkunzi zeenkomo zibe sixhenxe neenkunzi zeegusha zibe sixhenxe.”+ 30 Wenza ke uBhalaki kanye njengoko watshoyo uBhileham, waza wanikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.+